Izizathu zokuba kutheni abantu bathenge ii-SUVs
Iimoto neekhekhi SUVs
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni abantu bathenge iMidlalo yezithuthi
by UDale Wickell
Ngaba i-SUV i-Vehicle eyiyo?
Ngaba awuqinisekanga ukuba kufuneka uthenge i- SUV ? Nazi ezi zintlanu zezizathu eziqhelekileyo abantu abanikezelayo zokuthenga imoto yombane . Ngaba zizathu ezilungileyo? Uyagqiba.
Isizathu # 5
Bafuna ukudibanisa ukuxhuma amandla kunye nabahlali beendawo. Kuyinyani ukuba ii-SUV ezininzi zinokukrazula ngaphezulu kwama-2500 iipounds kwaye ezininzi zazo zihlala abagibeli abahlanu; ezinye zize zinike iindawo zokuhlala ezintathu.
Isizathu # 4
Baziva ukuba i-SUV iyithuthi ekhuselekileyo kuba ikhudlwana kwaye iyakhiwe.
Kwaye bathanda isithuthi esinesihlalo esiphezulu. (Kukho iinkxalabo malunga ne-rollover, kodwa abaninzi abavelisi basebenza kwiinkqubo zokunciphisa umngcipheko.)
Isizathu # 3
Bayafuna umthwalo wempahla kwaye bazive ukuba i-SUV iphethe ngaphezulu kweevili zesikhululo. (Indawo yesithwala ye-SUV inokuba yinde kakhulu, kodwa kwiimeko ezininzi azikho ixesha elide nelo liloliwe.)
Isizathu # 2
Bafuna isithuthi esiza kuhamba kakuhle kwikhephu. (Nangona le nto ingaba yinyaniso xa uthelekisa i-SUV ukuya emotweni yevili yesondo, kungenjalo okanye kungeyiyo imeko xa kuthelekiswa nevili eliphambili okanye yonke imoto yokuqhuba isondo kunye namathayi afanelekileyo.)
Isizathu # 1
Bafuna amandla okuxosha. (Uninzi lwezithuthi zesebenzi azihambanga kakuhle kwiimeko eziqhekezayo, kunye nenani labantu abayifumene naloo nto lincinane xa kuthelekiswa nenani labantu abaqhubayo.)
Kodwa inyaniso i ....
Uninzi lwabantu bathenga i-SUV kuba banako.
Akunakulungelelanisa naziphi na iimfuno zabo, kodwa zizalisekisa iimfuno zabo. Thina baseMerika bathanda imoto yethu. Siyaxabisa umzobo olungileyo , kwaye i-SUVs ngoku iyakwazi.
Ingxenye yesizathu esiyisebenzelayo yokuphila kukufumana izinto esizifunayo, kuquka ukukhetha kwethu ukuthutha. Ewe, i-SUVs isebenzisa igesi engaphezulu kuneemoto ezininzi, kodwa kukho ii-SUV ze-hybrid eza kule dilesi.
I-2005 Ford Escape Hybrid ngumzekelo omnye, kwaye ibonakala iyilungileyo. Jonga ukuba ezinye i-SUV hybrids ziza kuziswa xa abathengi befuna.
Ezinye ze-compact SUV zifumana i-gas efanelekileyo ye-gas mileage-ukuguqula phantsi ngokukhulula mhlawumbi iyindlela enhle kubaqhubi abaninzi. Enye indlela yokubukela kukunyuka kweenjini ze-diesel ezicocekileyo kwiSUVs.
Ingaba isizathu sakho sokuba ne-SUV "sivumelekile" okanye cha, ukuba yiyo ofuna ukuyiqhuba, kwaye unayo indlela, kufuneka ukuba yintoni egalaji yakho.
I-Nissan SUV kunye ne-Crossover Vehicle Overview
Izithuthi zeMoto zeMoto
Iipropati eziPhambili eziPhumi ezilishumi ezi-12 ze-SUV kunye ne-Crossovers
Iimoto zeeNkonzo zeFeedom Sport
Ngo-2010 iDodge Grand Caravan Iinkcukacha kunye nexabiso
Indlela yokwenza inkcukacha ngeSUV yakho, Isinyathelo 1
Ukuthenga i-Tabla kunye neeJor Drum Sets
Biography ka Diego de Almagro
Indlela I-Soap Operas Ifumana Ngayo Igama Labo
Ukudlala ibhola yeBhola kungabangela izifundo zoBomi ezibalulekileyo
Imbali yeNgqungquthela yesiFrentshi: UkuBuyiswa koBugcisa
Kutheni amaYuda adla ubisi kwi-Shavuot?
I-Biggest Donald Trump Scandals (kude kangaka)
Ixhaphake kangakanani iSathana Isenzo sokuShatshazwa?
Kutheni Ubunzima Ubunzima Bwenzeka?